Myat Shu - 2011 December
You are here : Myat Shu » Archives for December 2011
ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင်၏ နိုင်ငံရေးစာပေများ
Published By Myat Shu On Saturday, December 31st 2011. Under မျက်ရှု, အမှတ်တရ
ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းပါးမှာ ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်ရဲ့ ဈာပနကို သူ့ကို လေးစားချစ်ခင်သူများက ခြေကျင် ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်း တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင် ကွယ်လွန်တဲ့ရက်စွဲကို အမျိုးမျိုး ရေးသားကြပုံနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။ အထင်ကရပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးနဲ့ပတ်သက်လို့ ရေးသားရာမှာ လွဲမှားမှုမရှိမှ နောက်ပိုင်း ဖတ်ရှုလေ့လာသူတွေအတွက် အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ‘ဦးချစ်မောင် ကွယ်လွန်တဲ့ရက်စွဲက ၁၉၄၆ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃ ရက် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ နံနက် ၉ နာရီ ၁ဝ မိနစ်အချိန်တွင် ဆုံးသည်’ လို့ ဆရာမိုးဟိန်း စုစည်းရေးသားထားတဲ့ ‘ဆင့်၍ဆင့်၍ ဆက်၍ဆက်၍’ စာအုပ်ထဲက ဈေးနှုန်းသတင်းစာ ဓာတ်ပုံမှာ တွေ့ရပါတယ်။ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး ရေးသားတဲ့ ‘သူလိုလူ’ စာအုပ်မှာလည်း ဧပြီလ ၂ ရက် တညလုံး ကုသရပုံ၊ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Friday, December 30th 2011. Under မျက်ရှု, အမှတ်တရ
သက္ကရာဇ် ၂ဝဝ၂ ခုနှစ် ဧပြီလ ၆ ရက်နဲ့ ၇ ရက်က ရန်ကုန်မြို့ အမျိုးသားပြတိုက်မှာ ‘ဂျာနယ်ကျော် ဦးချစ်မောင် နှစ် ၉ဝ မြောက် မွေးနှစ်၊ ဂျာနယ်ကျော်မမလေး နှစ် ၂ဝ မြောက် ကွယ်လွန်နေ့ နှင့် ဂျာနယ်ကျော် စီးဆင်းမှု အထိမ်းအမှတ်ပြပွဲ’ ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့မှာ အခမ်းအနားသဘာပတိ ဆရာပါရဂူက ဂျာနယ်ကျော်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်လို့ အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင် ဆီမှာ ဆန့်ကျင်ဘက် ခြေလှမ်း ၂ ခု ပေါင်းဆုံနေတာ မြင်တွေ့ကြောင်း အထူးသဖြင့် ရိုးသားခြင်းနဲ့ ဆန်းပြားခြင်း၊ ရှေးဆန်ခြင်းနဲ့ ခေတ်မီခြင်းတို့ဖြစ်ကြောင်း ဆရာပါရဂူက ရှင်းပြသွားပါတယ်။ အမှတ်ရစရာ အဖြစ်အပျက်များနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း စိတ်ဝင်စားစရာတချို့ကို ... Continue Reading
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုအတွက် ငွေကြေးနှင့် အခြား အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းလိုပါက
Published By Myat Shu On Friday, December 30th 2011. Under မျက်ရှု, အသိပေးခြင်း
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ ကူးတို့ဆိပ်ရပ်ကွက် မီးလောင်ပေါက်ကွဲမှုအတွက် ငွေကြေးနှင့် အထောက်အပံ့ ပစ္စည်းများ လှူဒါန်းလိုပါက Lotus Foundation အသျှင်ဥဂ္ဂပဏ္ဍိ ဓမ္မရက္ခိတကျောင်း၊ အနောက်ဘင်္ဂလားတိုက်၊ ရေတာရှည်လမ်း၊ ဗဟန်းမြို့နယ်။ ဖုန်း ၀၁ ၅၅၇ ၅၇၈၊ ၀၉ ၇၃၁ ၈၉ ၁၀၂ အသျှင်ဝီရိယ ၀၉ ၇၃၁ ၉၆ ၃၉၆ ဒေါ်ယမင်းသိန်း ၀၉ ၇၃၀ ၄၁ ၂၃၈ ဦးကျော်လင်း ၀၉ ၅၀ ၃၀ ၈၈၉ ဦးဇင်မင်းမော် ၀၉ ၄၃၁ ၆၅၆၅၀ ဒေါ်ရွှေစင်ကြူ DanChurchAid ၀၉ ၄၃၀ ၂၉၆ ၄၉ တို့ထံသို့ ဆက်သွယ်လှူဒါန်းနိုင်ကြောင်း မျက်ရှုအဖွဲ့အနေဖြင့် အသိပေးနှိုးဆော်အပ်ပါသည်။ မျက်ရှုဝိုင်းတော်သားများ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, December 27th 2011. Under ၀တ္ထု, စကားပြေလက်ရာသန့်, မျက်ရှု
(၁) ဒေါသထွက်ခြင်းသည် မကောင်း။ ဤသည်ကို ရည်းကျည်းဒန် သိပါသည်။ သိပါလျက်နှင့် ဒေါသကို ချုပ်တည်း၍ မရ။ နားထင်နားရင်း ထူလာအောင် ဒေါသထွက်ခဲ့ရသည်။ ယမန်နေ့ ညနေက ဖြစ်ခဲ့ရသော ဒေါသသည် သည်ကနေ့ နံနက်အထိ အငွေ့ မသေချင်သေး၊ ဒေါသငွေ့ တလူလူ လွင့်ချင်ချင်ဆဲ ဖြစ်ပေ၏။ နေသည် မထွက်ခင်က ပူချင်နေသည်။ ငါးကြင်းကွက် တိမ်ပ၀ါများ လယ်ပြင်တစ်ခွင် တစ်ကျင်းလုံးကို လွှမ်းထားငြား အိုက်စပ်စပ်ကြီး။ လေပြည်ကလေး ဖွေးသော်လည်း ဖွေးလာခိုက်သာ နေသာသယောင် ရှိ၏။ လေငြိမ်သည်နှင့် ချွေးစက်များသည် မွေးညင်းပေါက်မှ ခေါင်းပြူလာပြီ။ ရည်းကျည်းဒန် မျက်နှာသည် ယခု အထိ တင်းမာနေဆဲ၊ ခက်ထန်နေဆဲ ရှိသေး၏။ ဒေါသဆောင်နေသောကြောင့် ပျိုးစည်းသည် မလေးလံပါ။ ... Continue Reading
ခရမ်းလွန်ထုထည်များနှင့် ၂၄ နာရီ
Published By Myat Shu On Monday, December 26th 2011. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
(၁) သက်ရှိသက်မဲ့ အရာဝတ္ထုမျိုးစုံတို့ ဖုံးလွှမ်းတိုးဝှေ့မှုကြောင့် မျက်စိအောက်မှ ပျောက်လိုက်ပေါ်လိုက် ဖြစ်နေကြ မြေပြင်ကို ကြည့်လိုက်တိုင်း ကျွန်မဦးနှောက်ခန်းတွေမှာ မေးခွန်းတစ်ခုတည်းဖြင့် ကျပ်ညပ်ပြည့်လျှံသွားမြဲဖြစ်သည်။ ကောင်းကင်နှင့် မြေပြင် ဘယ်သူကပိုပြီး ဧရိယာကျယ်ပြန့်မလဲလို့။ ချုပ်ရိုးရာနဲ့ အနာဖေးတွေကတော့ ဆတူလောက်ပဲရှိလိမ့်မည်မို့ ကျွန်မ ဘာမှထပ်ပြီး သံသယမထားချင်တော့။ ကျွန်မကတော့ ကမ္ဘာမြေပြင်ဟာ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဒဏ်နဲ့ အခြားအခြားသော သဘာဝအန္တရာယ်ဆိုးတွေကြောင့် ကျဉ်းကျပ်လာတာလား။ ဒါမှမဟုတ် သက်မဲ့တွေနဲ့ ကျွန်မတို့လို သက်ရှိတွေရဲ့ ခြေ ထောက် ဧရိယာတွေက ဘဲခြေတွေလို ကျယ်ပြန့်လာကြလို့လား။ မြေကြီးပေါ် ခြေနှစ်ချောင်းထောက် မရပ်ချင်ဘဲ အလျားလိုက် ပက်လက်အိပ်ချင်သူတွေ နှုန်းပိုများလာသလား မကြာခဏတွေးကြည့်မိဘူးပါတယ်။ အင်း…ကျွန်မတို့ရဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာတွေ တဖြည်းဖြည်း ကျုံ့ဝင်ထားရတာကတော့ သေချာတယ်။ ခုချိန်မှာ မီးခွက်စောင့် အာလာဒင်လို ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, December 24th 2011. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု
(၁) သူ့ကိုမွေးပြီး နာရီပိုင်းလောက်အကြာတွင် သူ့အမေဆုံးသည်။ သူ့အဖေနောက်ကို လိုက်သွားခြင်းဖြစ်၏။ သူ့အမေသည် သေဆုံးခါနီးဆဲဆဲတွင် သူ့သားကလေးအား မောင်စု ဟု ခေါ်ပါလေဟု မှာကြားခဲ့သည်။ (၂) မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မောင်စုသည် ယခုအခါ ရေခဲရေရောင်းနေ၏။ ဆူးလေဘုရားအနီး ရသာမုန့်တိုက် (ယခင်ရှားမီး)နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် မဟာဗန္ဓုလလမ်းဘေး အမှတ် ၁၊ ၃၊ ၁၃၊ ၁၄ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များ တစ်ဝိုက်သည် သူ့ရေခဲရေဖြန့်ဖြူးရာဌာန ဖြစ်သည်။ ခွေးခြေတစ်ခုပေါ်တွင် သံပုံးဝိုင်းရှိသည်။ သံပုံးဝိုင်းပေါ်တွင် ရေခွက်တင်ရန် သံဆန်ခါရှိသည်။ သံဆန်ခါနှင့် ဆက်လျက် သံတိုင်ကလေးတွင် ရေစစ်သုံးခု အဆင့်ဆင့် ရှိသည်။ သံဆန်ခါပေါ်တွင် ရေခဲတုံးကို စွပ်ကျယ်စဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ရေခဲကို စွပ်ကျယ်စဖြင့် အုပ်ထားလျှင် ကြာရှည်ခံကြောင်း မောင်စု အတွေ့အကြုံအရ သိသည်။ သိပ္ပံပညာအရမူ စွပ်ကျယ်စသည် ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Wednesday, December 21st 2011. Under ကဗျာ, မျက်ရှု
မငြိမ်းချမ်းသမျှတော့ ကိန်းဂဏန်းက တိုးနေအုံးမှာဘဲ။ သေသူ ကျိုးသူ မွဲသူ အဲဒီလူတွေ ဘယ်သူတွေလဲ။ ကိုလေး (အင်းဝဂုဏ်ရည်) ၁၇.၁၂.၂၀၁၁ ... Continue Reading
ကျွန်ုပ် အလိမ္မာတိုးသော နေ့တစ်နေ့
Published By Myat Shu On Monday, December 19th 2011. Under ၀တ္ထု, စကားပြေလက်ရာသန့်, မျက်ရှု, အမှတ်တရ
(၁) ကျွန်ုပ်သည် ပုသိမ်မြို့၊ မြန်မာ ကရင် အင်္ဂလိပ်ကျောင်းတွင် (၉) တန်းလား၊ (၁၀) တန်းလား မမှတ်မိ။ စာသင်နေစဉ် စာမေးပွဲပြီး၍ မိမိနေရပ် ဟင်္သာတနယ်၊ နိဗ္ဗာန်ရွာသို့ မီးရထားစီး၍ ပြန်ခဲ့သည်။ ရထားပေါ်တွင် ရထားစီး များစွာပါ၏။ ကျွန်ုပ်သည် ထိုအခါက များစွာ စကားပြောချင်၏။ နှုတ်ဆော့၏။ ဘယ်သူနှင့် စကားစမြည် ပြောရပါမည်နည်းဟု အပေါက်အ၀ ရှာလျက်ရှိ၏။ ကျွန်ုပ်၏ ရှေ့တန်း မျက်နှာချင်းဆိုင်လောက်တွင် အသက် ၃၀ ကျော်ခန့်ရှိ ယောကျာ်းတစ်ယောက်ကို စိုက်ကြည့်မိသည်။ အသားကြမ်း၍ မဲညို၏။ ခေါင်းတုံးကို မျက်နှာသုတ်ပ၀ါ ညစ်ထပ်ထပ် ပတ်ထားသည်။ အင်္ကျီမှာ လယ်ထွန်အင်္ကျီ ဖြစ်၏။ လယ်ထွန်အင်္ကျီဆိုသည်မှာကား ဖျင်ကြမ်းကြမ်း၊ ရင်စေ့ပုံ၊ လက်ကျပ် အိတ်နှစ်လုံးတပ်၊ ... Continue Reading
အဆိုတော်၊ စစ်ဗိုလ်၊ စာရေးဆရာ၊ မင်းသား၏ သမိုင်းတဖြတ်
Published By Myat Shu On Thursday, December 15th 2011. Under ဓာတ်ပုံမှတ်စု, မျက်ရှု
၀င်းဦးနှင့် ရုပ်ရှင် ၀င်းဦးနှင့် ဂီတ ၀င်းဦးနှင့် စာပေ ၀င်းဦးနှင့် သဘင် ၀င်းဦးနှင့် အားကစား အင်္ဂလန်တွင် ဆေးသွားကုစဉ်က သို့... အိုင်ရင်း မွေးတစ်နေ့ (နှစ် ၅၀ ပြည့် မွေးနေ့ပွဲ) သေတစ်နေ့ "၀င်းဦးနှင့် ရုပ်ရှင်" ကဏ္ဍအောက်ရှိ ဓာတ်ပုံများမှအပ ကျန်ပုံများမှာ စန္ဒာမဂ္ဂဇင်း၊ နှစ် ၂၀ မြောက် အထူးထုတ်ထဲမှ ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သောပုံများအတွက် တုန်ခြင်း မှုန်ခြင်း သည်းခံပါ :P မျက်ရှုအဖွဲ့ ... Continue Reading